Toa miverina amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo Apple Stores any UK | avy amin'ny mac aho
Tamin'ny martsa 2020 dia niova ny fiainantsika ary tamin'izany fotoana izany dia noheverina fa "kely" izany. Na izany aza, efa ho roa taona aty aoriana, dia mbola mijaly noho ny viriosy izay tsy fantatra teo aloha izahay. Ilay antsoina hoe COVID-19 dia nivoatra be nandritra ny fisehoany voalohany ary rehefa toa nihatsara ny zava-drehetra, dia nisy variana vaovao antsoina hoe Ómicron indray nanozongozona ny fototra. Niverina tamin'ny fepetra voalohany izy ireo mba hamerana ny fitsidihana ara-barotra, ohatra, ao amin'ny Apple Store. Na izany aza, farafaharatsiny any UK, toa miverina amin’ny efa-bolana lasa izay.
Miaraka amin'ny fahatongavana sy ny fandehan'ity areti-mifindra ity, ny areti-mifindra mahatsiravina ho an'ny firaketana an-tsoratra, tsy fantatray na tsara ity vaovao ity, na maharitra na mihelina. Manam-pahaizana maro no efa manomana antsika hiaina miaraka amin'ny viriosy mandritra ny fiainana amin'ny fomba tsy misy farany. Na izany aza, mbola tsy maintsy mandray fepetra fiarovana maro isika izay manakana ny ankamaroantsika tsy hanao zavatra araka izay tiantsika. Tena tsara ny fivarotana an-tserasera. fa ny afaka mandeha manandrana sy mikitika ary manontany dia zavatra tsy hita.
Nametra ny fitsidihana indray ny Apple Store noho ny areti-mifindra vaovao sy ny fanitarana ny variana Omicron an'ny COVID-19. Noho izany, raha te handeha any amin'ny magazay ianao haka vaovao na hividy, dia tsy maintsy nanao izany tamin'ny alalan'ny fotoana. Any UK dia efa miova izany. Apple dia manokatra fivarotana Apple maromaro manerana ny firenena mba handehanana mpanjifa.
Apple dia nanavao ny lisitry ny fivarotany ho an'ny fivarotana Apple 17 any UK. Midika izany fa afaka mandray mpanjifa indray izy ireo tsy misy fotoana. Na dia misy fivarotana Apple 38 aza any UK, Amin'izao fotoana izao dia 17 amin'izy ireo ihany no azo atao. Marina fa hampiharina amin’izy rehetra io fepetra io raha vao mamela izany ny zava-misy.
Fivarotana tsy mila fotoana hitsidihana intsony ny:
hazo fijaliana brindly
Bromley ny Glades
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Toa miverina amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo fivarotana Apple UK